Naagihii Dhebayaco Oo 74 Nin Looga Laayey (Af-urur) Tignikadii Ay Haysteena Gebbi’ahaanba Wax Laga Qabsaday Iyo Wax Laga Gubey Laga Dhigay – Codka Qaranka Tanadland
Naagihii Dhebayaco Oo 74 Nin Looga Laayey (Af-urur) Tignikadii Ay Haysteena Gebbi’ahaanba Wax Laga Qabsaday Iyo Wax Laga Gubey Laga Dhigay
Sidaad la socotaan dagaalkii dhuumaalaysiga ahaa ee u dhexeeyey beelaha Warsangeli iyo Habar-majeerteen wuxuu noqday gabaabsi. Beesha Warsangelina waa’ay u suuro geliweydey, in codowga dhulkooda haysta goor habeen ah ay tuuryeeyaan mooyee, inay iska kiciyaan oo ay dhulkooda ka xoraystaan. Walow ay jirto sanadkaan aynu ku jiro in beesha Warsangeli ay 17 nin oo Habar-majeerteen ah siyaalo kala duwan ay gaadmo ugu dileen. Hadana xiisadda u dhexaysa beelaha Warsangeli iyo Habar-majeerteen waxaa la orankaraa, dadka reer Tanadland Maantay ka horow marna sidii larabey ugama aysan faa’iideysan.
Balse hada dagaalkii aro Warsangeli ka socdey mudada 12 ka sanaddood ah ee dhuumaalaysiga ahaa, oo u dhexeeyey Warsangeli iyo Dhebayaco ayaa wuxuu isubedelay dirir dhab ah. Kedib markii saraakiisha reer Tanadland ee ku jira ururka Al-shabaab ay ka dhaadhiciyeen xulufadooda, in ciidan iskudhaf ah la geeyo galbeedka gobalka bari. Si ay maleeshiyada Habar-majeerteen ee naflacaariga ah ay dhanka gobalka Bari ugu jebiyaan. Ciidamada iyo madaxda ururka Al-shabaab waxaa ugu badan hada beesha Hawiye. Waxaana ku xiga beesha Daarood walow 10 sano ka hor beesha Raxanweyn ay ugu badnaanjirtey. Waagii “Muqaawamada” oo itoobiyaanka iyo eyda “Mahbarka” lala dirirahayey. Beelaha Soomaalidu siday ugu kala badnaayeen ciidanka “Muqaawamada” ayey ugu kala badanyihiin ciidamada “Al-shabaab”. Marka laga reebo beesha Ogaadeen oo wakhtigii “Muqaawamada” ahayd beesh ugu badan beelaha Daarood ka ee “Muqaawamada” ku jira. Laakiin intii “Muqaawamadu” ay Al-shabaab u xuubsiibatey beesha (Mareexaan) ayaa boos kaas gashay. In dhaweydna beesha (Mareexaan) Al-shabaab waxaa ku weheshey reer Tanadland marka ay Daarood noqoto.
Berigii “Muqaawamada” beelaha Hawiye beesha ugu badan oo ciidamada “Muqaawamada” hogaanka u ahi waxay ahayd beesha (Cayr). Beelaha (Murursade) iyo (Saleebaan) kuna waa’ay ku soo xigeen. Waana sababta degmada (Xaradheere) iyo tuulooyin ku xeeran degmada Hobyo ay u maamulaan Al-shabaab. Degaanadaas oo ay ku badanyihiin beelaha (Saleebaan) iyo (Cayr).
Sida Sahalka Ah Ee 74 Nin Looga Xasuuqay Habar-majeerteen :-
Sideedaba sidaan horay marar badan aan halkaan uga sheegay, beesha Habar-majeerteen waa garac sheegato ah oo dadka Daaroodka ah aad uga dhaqan duwan. Soomaalida kalana xataa uusan hab-dhaqankoodu meelna ka shabihin. Dad badan oo an horay u aqoon hab-dhaqanbka beesha Habar-majeerteen marka ay maqlaan sida uu u dhacay xasuuqii (Af-urur) waa ay adagtahay si ay ku rumaystaan. Sababta oo ah rag 300 oo nin ah oo 9 tigniko ah haysta, 4 gaari oo ay sahay iyo saanadi u saarantahayna haysta, oo weliba degan oo difaac ku jira. In ciidan yar oo 100 nin ah intay soo weeraraan ay 74 nin ka laayaan, Tignikadii iyo wixii ay saad haysteen oo dhana ay ka furtaan wax soomaalida kale oo dhan ka suuroobikara maaha. Ee waa dhaqan Habar-majeerteen lagu yaqaan oo ay caan ku tahay.
Tusaale waxaan u soo qaadanayaa dhawr xasuuq oo horay loogu gesystey beesha Habar-majeerteen. Sidaad ogsoontihiin sanadihii 1982 da iyo 1983 ka beesha Sacad iyo lafaha beesha (Cismaan Yuusuf) ka dega gobalka mudug waxaa dhexmaray dagaal aad u qaraar. Dagaal kaasina wuxuu joogsaday markii beesha Sacad dagaalo badan lagu jebiyey oo ay quusteen. Haba ugu daraado dagaalkii ugu danbeeyey oo beesha (Cismaan Yuusuf) intay weerartay ay ku qabsatay saldhiga ciidan ee beesha Sacad. Fadeexadda kale oo beesha Sacad jabka maalintaas ka soo gaartey waxay ahayd. Waxaa jirey sargaal sare oo u dhashay beesha Ogaadeen qaasatan, qaasatan lafta reer (Cabdile) oo hada nool. Siyaasiyiinta caanka ah ee beesha Ogaadeen na hada ka mid ah. Intaan subaxaas fariisinka beesha Sacad aan la weerarin, Beesha (Cismaan Yuusuf) waxay xog ku heshay in ninka ogaadeen uu baqaarka xerada ciidamada hub badan ka xaday. Marka maadaama ay ogaayeen in dhawr jeer oo hore uu beesha Sacad hub ka iibiyey, Waxay odoroseen in maalinta uu hubka baqaarka ciidamada ka xaday maalinta xigta gelinkeeda danbe inuu hubka u geyn doono. Marka hadafka ciidamad beelaha (Cismaan yuusuf) wuxuu ahaa intaanu hubkaasi gaarin beesha Sacad inay fariisinkooda ay qabsadaan. Laakiin markii ciidamada beesha (Cismaan yuusuf) ay qabsadeen fariisinka beesha Sacad, oo ninkii ogaadeen ay nolol ku qabteen. Waxay ogaadeen in uu aroor hore fariisinka yimid oo gaari hub iyo saanad ah uu u keenay beesha Sacad. Markuu soo istaagayna isla markiiba xabadda ayaa bilaabatay oo wewerar culus ayaa fariisintii lagu soo qaaday.
Subaxaas ciidamada beesha (Cismaan Yuusuf) waxay gaareen goolo dhawr ah, sida maleeshiyada beesha Sacad oo dagaalka si xun loogu jebiyey fariisintii ciidankooda iyo wixii saad u yaaleyna laga qabsaday. Kaaga daran’e waxay gacanta ku dhigeen sargaalkii Ogaadeen iyo hubkii cusbaa ee uu u keenay. Walow ay beesha (Cismaan Yuusuf) ninkii cadowgooda hubaynayey markii ay qabteen ay sii’daayeen.
Sheekadaan waxaan uga gol’leeyahay xasuuqii (Baaroweyne) dadka qaarkiisna ay u yaqaaniin “Nus-qayaamo” markii uu dhacay (17/02/1991) ka hor, beelaha Sacad iyo Habar-majeerteen wax colaad ah oo ka dhexeeyey maysan jirin. Laakiin beelaha Sacad (Cismaan Yuusuf) maadaama dagaaladii xumaa ee dhexmaray wax heshiis ah oo laga gaaray aysan jirin, waxaa lays lahaa hadii beesha Sacad hubkii USC ay dowlada kala wareegtey ay saami fiican ka heshay, dagaalkii beelaha (Cismaan Yuusuf) iyo Sacad u dhexeeyey dib ayuu u bilaabmidoonaa. Laakiin waxaa dhacday in rag miisaan culus ku leh beesha Sacad ay ugu faanaan rag xiriir ka dhexeeyo oo beesha (Muumin Aadan) ah, inay qorsheeyeen weerar ay uga takhalusayaan beesha degta waqooyiga xaafadda (Israac) ee magaalada Gaalkacyo. Laakiin hadalkaas run loogama qaadan oo waxaa loogu jawaabey, faanka iska daaya oo waxaad samaynkartaan sameeya!!.
Habeenkii axadda ahaa ee ay taariikhdu ahayd (17/02/1991) waqooyiga xaafadda (Israac) waxaa lagu gawracay 700 oo nin oo beesha Habar-majeerteen ah. Laakiin habeenka uu dhacay xasuuqa sadexda magac leh ee kala ah (Sharqan-laawe), (Baaro-weyne) iyo (Nus-qayaamo), dadka reer Tanadland ee degan xaafadaha (Horumar), (Garsoor) iyo koonfurta xaafadda (Israac) kama aysan war helin jeer uu waagu beryey. Arinta u sababta ahayd in beesha Habar-majeerteen gebigooda oo dhan sidii arigii la qab-qato, waxay ahayd beesha Habar-majeerteen oo laga waayey hal nin ah oo inta qorigiisa qaata dagaalama ama hal xabad ah rida. Waxaana la rumaysanyahay in hadii hal nin oo Habar-majeerteen ahi uu dagaalamilahaa ama uu xabado ridilahaa. Inaysan suuragal noqoteen in xataa 200 oo nin dagaal habeen oo labada dhanba ay birtu dheregtey looga laayo.
Taas waxaa ka sii daran Habeenkii 700 oo nin beesha Habar-majeerteen iyadoo aana dagaal dhicin laga xasuuqay, maleeshiyada beesha Sacad hal nin oo qura hawlgal kaas ugama uusan shihiidin mujaahidiintii fuliyey. Sababta aan maqaalkaan ugu soo qaatay xasuuqii “Sharqan-laawe” na waxa weeye, wuxuu meelo badan ka shabahaa xasuuqa ka dhacay (Af-urur). Arinta kale oo la yaabka lihi waxa weeye Habar-majeerteen ilaa iyo hadeer xasauuqii loogu geystey (Af-urur) waa’ay qiran la’yihiin. Habar-majeerteen bal inay garac yihiin oo aysan nasab ahayn, xataa waa ay inkiraan 700 ka nin ee looga xasuuqay 1991 -gii inay Habar-majeerteen ahaayeen, oo waxay yiraahdaan “Dad kaasi waxay ahaayeen Daarood ay USC laysay”. Iyaga oo ka baqaya in la ogaado sida ay fuleyyaal u yihiin oo sahalka loogu qab-qabtay sidii arigii.
Xasuuqii Degaanka (Af-urur) Iyo Siada Habar-majeerteen Loogu Xasuuqay :-
Raga lagu xasuuqay degaanka (Af-urur) habeenkii khamiistii dhaweyd taariikhdu markii ay ahayd (08/06/2017) dhimashadu waa 74 nin. 73 nin oo Habar-majeerteen ah iyo nin nacas ah oo beesha Dhulbahante ah. Qasaaraha dhaawaca ah ee maleeshiyada beesha Habar-majeerteen loo geysteyna waa 122 nin. Raga dhaawaca ah ayaa waxaa la sheegay in 93 ka mid ahi ay yihiin naf-ka-dhawr aan caaqibo lahayn. Ninka (Dhulbahante) ayaa wuxuu ka soo jeedaa lafta (Naaleeye Axmed) oo ay Dhulbahantuhu ku xantaan inay doqomo yihiin. Rag aqoon u lahaana waxay sheegeen in uu nin kaasi ahaa nin dibjir ah oo midiidin u ah cayayaanka Habar-majeerteen ee la gumaaday.
Sidaad la socotaan 12 kii sanadood ee ugu danbeeyey beesha Dhebayaco maleeshiyadeeda xooga ku haystey degaanka beesha Warsangeli, waxaa xaqiiqo ah in beesha beesha Warsangeli ay xiniinyaha ka bixiyeen. Maadaama beesha Warsangeli ay gabtay in maleeshiyada cunaqabataynta ku haya ee jidgooyada dhigtay degaankooda, oo mudada 12 ka sanaddood ah ku amarku-taagleynayey inay dhulkooda ka xoraystaan. Saldhiga maleeshiyada Habar-majeerteen ee degaanka (Af-urur), maleeshiyada beesha Warsangeli tiro 30 jeer ka badan ayey goor habeen ah weerareen. Laakiin Warsangeli wixiisu dagaal maahayn ee waxay ahayd xabado tuuryeyn qaabdaran. Walow ay jirto in maleeshiyada beesha warsangeli oo ay ku jiraan rag badan oo qabiir ku ah sida miinada kala duwan loo sameeyo. Inay rag aan yarayn ay uga laayeen Habar-majeerteen miino ay wadooyinka ugu xireen. Waxaana la orankaraa dagaalii beesha Habar-majeerteen uga furaa bariga gobalka bari waa u shiiqay.
Hadaba waxaa jirta in (Sheekh Xasan Maxamuud Takar) iyo (C/casiis Abu Muscab) ay abaabuleen ciidan yar oo 100 nin ah oo ka taqalusa cayayaanka Habar-majeerteen ee fariisinkoodu uu yahay (Af-urur).
Ragaasi iyaga labo rac ah ayey bil ka hor waxay ka gudbeen gobalka Mudug. Waxayna gaareen magaalada Ceerigaabo oo ay uga sii gudbeen saldhig ciidan oo ay Al-shabaab ku leeyihiin buuraleyda Golis. Halkaas oo loogu diyaariyey ciidanku hubkii iyo sahaydii ay ku dagaalgelilahaayeen. Ciidamada Al-shabaab ee weeraray fariisinta (Af-uru) waxaa hogaaminaayey rag reer Tanadland ah oo yaqaana habdhaqanka beesha Habar-majeerteen. Maadaama saraakiisha ciidan iyo madaxda wilaayada Al-shabaab ugu jira reer Tanadland ay qorsheeyeen weerarkaan. Ciidankaasi buuraha Golis oo u muuqda fariisinta maleeshiyada Habar-majeerteen dhanka waqooyina uga beegan, waxay ka soo degeen goor saqdii dhexe ah. Qorshahooda dagaalna wuxuu ahaa inaysan wax xabad ah ridin inta ay fariisinta gudaha u gelayaan oo ay ka qabsanayaan tignikada taala oo dhan. Ciidanka xoogiisii markay sharqan-la-aan ay fariisintii gudaha ugu galeen. Saldhiga hareerihiisa waxay uga tageen ciidan yar oo toogta wixii firxad ah oo ay arkaan.
Ciidamada Al-shabaab nasiib wanaag waxaa u suuragashay inay durba qabtaan oo ay toorey ku gawracaan dhawr nin oo soo jeedey. Waxayna dabeed ay isku gadaaneen oo ay xabad ku bilaabeen cayayaankii Habar-majeerteen. Balse walow ay ciidamada Al-shabaab ay fariisinta ay hareer-reeyeen oo ay qabsadeen, maadaama meeshu ay ahayd meel banaan oo dul ah. Wax dhismeyaal ah oo ku yaalaana aysan jirin. Waxaa jirey maleeshiyo aan yarayn oo inta dusha saldhiga hareeraha ka ah dhagxaan gabaad ka dhigtay, halkaas jiifey oo hubkooda ku haystey. Niman kaasina waa nimanka keliya oo dagaalamay, intuusan waagu beryina dhaawacooda qaatay oo la cararay. Balse maleeshiyadii Habar-majeerteen ee fariisinka joogtey gebi ahaanba waa la laayey. Weliba 30 nin oo ka mid ah nolol ayaa lagu qabtay oo waa la bireeyey. Gebi’ahaan na wixii ay haysteen oo dhan waa laga qaatay. Qaniimada ay meeshaas ka heleen ciidamada Al-shabaab waxaa ka mid ah 9 gaari oo ay saaranyihiin qoryo waaweyn. 5 gaari oo u saaranyahay qoriga suuga, 2 gaari oo u saaranyahay qori P10 ah, 2 gaari oo ay saaranyihiin dhashiikeyaal. Waxaa kaloo laga qabsaday maxaysatada naflacaariga ah ee u gabalkoodu dhacay, 3 booyadood iyo 4 gaari oo kuwa xamuulka qaada ah. Waxaa kaloo qaniimada laga furtay maxaysatada Habar-majeerteen ka mid ah. 46 qori oo dabojeexyo ah “PKM”, 120 qiri oo aakeyaal ah “AK47” iyo 16 qori oo baasuukeyaal ah “RPG”.
Mujaahidiinta geesiyiinta ah ee ka qayb qaatay cidibtirka gunta Habar-majeerteen ayaan haba yaraatee wax waxyeelo ahi aysan ka soo gaarin waajibaadka muqadaska ah ee ay guteen. Hubka ay ka furteen ciidamada Al-shabaab maxaysatada halaagu uu ku dhacay ee Habar-majeerteen, ayaa waxaa la filahayaa inay ku abaal mariyaan oo ay qiime jaban uga iibiyaan ganacsatada beesha (Habar-Yoonis). Khaasatan ganacsatadii ku soo dhaweeyey gobalka Sanaag oo markii hore hubka ay ku dagaal galeen ka iibiyey. Sida aan xog ku hayo, ciidamada Al-shabaab ee fariisinka (Af-urur) maxaysatada Habar-majeerteen ku xasuuqay maadaama ay hadafkoodii gaareen. Waxaa la filahayaa inay todobaadka danbe gobalada dhexe iyo koonfurta Soomaaliya ay ku soo noqdaan.
Reer Tanadland Iyo Sida Ay Al-shabaab Ugu Abaalgudikaraan:-
Sidaan marar badan uga dhawaajiyey xasuuqa joogtada ah ee ku socda gunta Habar-majeerteen waa xasuuq hadafkiisu uu yahay in lagu cidibtiro. Hadana xasuuqu wuxuu marahayaa meel wanaagsan oo gebo-gebo ah.
Si kastaba ha ahaatee, xasuuqaan ayaa wuxuu yahay xasuuqii iyo jabkii afraad oo loo geysto beesha Habar-majeerteen mudo labo sanaddood gudahood ah. Habar-majeerteen oo ah duul aad u jilixsan oo hubka inay ku xaragoodaan mooyee aan looga baran inay ku dagaalamaan, ayaa waxaa hubaal ah in ciidan ahaan si xun loo wiiqay oo ay rasaas iyo hub la’aani hayso. Dhawaan waxaa la sheegay in markii maleeshiyada Habar-majeerteen la xasuuqay inay la hadleen Faramaajo oo ay ka baryeen in uu rasaas u soo diro. Iyaga oo ku calaacaly in rasaas aysan haysan dagaalna uu dhawr aag uga furanyihiin. Laakiin xaqiiqdu waxay tahay Faramaajo haduu cid hub u helikaro talkiis ayaa uga baahan oo u siinahayaa.
Reer Tanadland Al-shabaab waxay ugu abaalgudikaraan dhawr siyaalood, waxaase ugu muhiimsan labo arimood.
1) In qorsheyaasha Al-shabaab ay rabaan inay fuliyaan ay ka qaybqaataan reer Tanadland.
2) Wax kasta oo taageero ah oo ay Al-shabaab u baahdaan in reer Tanadland ay ku taageeraan maadaama ay abaal weyn ay noo galeen.
“Gunta Habar-majeerteen Mindhaa Gawda Kama Deyno”